Khabar Kantipur » अन्तरास्ट्रिय
दोहा । चितवन भरतपुरकी मिना थापा क्षेत्री दोहाको चिल्लो सडकमा विश्वको महँगो मानिने ‘लेमोजिन’ गाडी हुइँक्याइरहेको भेटिन्छिन्। उनको काम हो, कतारी महिलालाई ट्याक्सीमा उनीहरूको गन्तव्यतर्फ लैजाने । करिव ६ वर्षअघि कतार प्रवेश गरेकी मिना अहिले यहाँ ट्याक्सी चलाउने पहिलो नेपाली महिलाको रुपमा चर्चित छिन्। चितवनको.....
किसानले आफ्नो उत्पादनको बजार भाउ नपाउँदा कहिले बारीमा डोजर लगाउनुपर्ने, कहिले गाई-भैंसीलाई खुवाउनुपर्ने त कहिले सडकमा पोखेर विरोध जनाउनुपर्ने बाध्यता छ। नेपाललाई कृषिप्रधान देश भने पनि उब्जनीको कुनै मूल्य नभएपछि कृषकहरूलाई खेती गर्न कसरी मन लाग्छ र? अब नेपालबाट पहिलोपटक तरकारी विदेश निर्यात हुन थालेको.....
बैदेशिक रोजगारीका क्रममा बिदेशमा रहेका ५३२ नेपाली जेल परेका एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । कानुनविपरित कार्य गर्ने नेपालीहरु सो सङ्ख्यामा जेल पेरेका हुन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै जेल पर्नेको संख्या पनि बढेको बताए । सबैभन्दा.....
इस्लामाबाद : पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति तथा पाकिस्तान पिपल्स पार्टीका सहयाक प्रमुख आसिफ अली जरदारी गिरफ्तारीमा परेका छन् । सरकारको भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दा हेर्ने निकाय अन्तरगत टोलीले उनलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो । सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्दामा अलीसहित उनकी बहिनी फरायल तालपुरको पुनरावेदन सोमबार.....
यो हो विश्वकै अनौठो आलु, जसलाइ खाँदा…
जेन्सी । आलुको सेवनबाट दिर्घायु बन्ने खबर कहिल्यै सुन्नु भएको छ ? यदि छैन भने यो खबरले तपाईको आयु नै बढाउन मद्धत गर्नेछ । प्रसंग हो दिर्घायु बनाउने आलुको । जसलाई बैज्ञानिकहरुले केही वर्ष खर्चेर सफल परिक्षण गर्न सषम भएका छन् । टेस्ट ट्यूबमा तयार गरेर पछि माटोमा रोपिने यो आलु वैजनी रंगको छ । सामान्यतया बजारमा.....
मत परिणाम खराब आएपछि भारतीय कांग्रेस नेताको ‘हर्टअट्याक’ भई निधन
लोक सभा निर्वाचनको मतगणना चलिरहेका बेला भारतको मध्य प्रदेश राज्यमा प्रतिपक्षी भारतीय कांग्रेसका एक नेताको हृदयघात (हर्टअट्याक)का कारण निधन भएको छ । मध्यप्रदेशका सिहोरस्थित मतगणना केन्द्रमा रहेका ती नेतालाई हृदयघात हुनासाथ जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो । सिहोर जिल्लाका कांग्रेस अध्यक्ष रतनसिंह ठाकुरको.....
भारतीय लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको राष्ट्रिय गणतान्त्रिक गठबन्धन(एनडीए)ले पूर्ण बहुमतका साथ सरकार बनाउने भएको छ । यसैबिच बलिउड अभिनेता तथा भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार सन्नी देवल पनि पञ्जावको गुरदासपुरबाट विजयी भएका छन् । उनले भारतीय कांग्रेसका उम्मेदवार सुनिल जाखरलाई झण्डै ७५.....
अभिनेता सन्नी देवलको आमा छोरा नै भारी मतले अगाडि
भारतको लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका सन्नी देवल र उनकी सौतेनी आमा हेमा मालिनीले भारी मतले अग्रता हासिल गरेका छन् । बिहीबार जारी मत गणनामा दुबै आमा छोराले दिउँसो ३ बजेसम्मको मत परिणाम अनुसार ५० हजार भन्दा बढी मत अन्तरले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेका हुन्। गौरदासपुर.....
भारतीय जनता पार्टीले नतिजा सार्वजनिक नहुँदै विजयोत्सवको तयारी गर्दै
एजेन्सी नयाँदिल्ली : विभिन्न मत सर्वेक्षणले लोकसभा चुनावमा सत्तारुढ घटक विजयी हुने संकेत गरेपछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का कार्यकर्ता मे २३ मनाउने तयारीमा जुटेका छन्। भाजपा मुख्यालयमा मे २३ का लागि तयारी गरिरहेका छन्। कंग्रेस मुख्यालयमा पनि विगतमा भन्दा राम्रो स्थान हासिल गर्ने भन्दै प्रतीक्षा गरिरहेका.....